Indonesia in Focus: Ilaah ku amray dadka ay xiraan xubnaha taranka (jirka).
Ilaah ku amray dadka ay xiraan xubnaha taranka (jirka).
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (365)
(Qaybta saddex boqol iyo shan iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, September 7, 2015, 19:19 pm).
Ilaah kitaabka quduuska ah Quraanka iyo Xadiiska (Sunnah / al-xigmad) amar ku bixiyay in aadanuhu, rag iyo dumarba in ay xirto xubnaha taranka ku tusiyo Sunnaha.
Gaar ahaan loogu tala galay dumarka ee Indonesia, gaar ahaan 1970 iyo Haweenka Muslimaadka ah Malaysia 1980'an arkay dad badan oo xijaaban / ilxidhka haweenka Indonesian dibandngkan.
The grantee dumar arday MARA Malaysia la geeyey Maraykanka tusaale ahaan, oo hore u isticmaali xijaabka, halka arday dumar ah oo ka Indonesia guud ahaan inkasta oo uu la aan xiran xijaabka Muslimka ah.
1980 waxaa jiray diinta ka San Diego, California, magaca United States Omar Abdul Madjid uu booqday Indonesia joojino ee Kuala Lumpur, Malaysia, ayuu yiri, i weydiiyay sababta Malaysia naag uu la kulmay ee Malaysia badan oo horey u xirnaa Xijaabka , halka Indonesia, haween badan oo Muslim aan xiran xijaabka.
Si kastaba ha ahaatee, haddii haddii Omar booqasho kale si Indonesia ee 2015, markaas ayuu arki doonaa badan oo dumarka Muslim Indonesia hore u xirto, makhribkiina naagtaydii Muxammad Jusuf Madaxweyne ku-xigeenku Kalla ayaa waxaa horey u hadlo xijaab dheer, sidoo kale dhowr wasiir oo ay ka mid yihiin Wasiirka Khofifah Indar Parawangsa, haweenka meelaha durugsan Indonesia, in kastoo ay weli ma fahmin ku saabsan amarka waajibaadka salaadda, laakiin ay xiran xijaabka.
Fanaaniin badan oo caan ah Indonesia ayaa sidoo kale xiran xijaabka, sida Sandra, guusha Artis Indonesia X Factor Saskia Patin Lubis iyo xarumo warbaahineed badan, reporter warbaahinta kuwaas xirto xijaab.
Sidaas socodka ah ee Islaamka (wacyiga sharciga Islaamka) ee Indonesia ka dhanka ah dhaggan bilaabay inuu u barwaaqoobi.
Hadda muxaadarooyinka diinta raadiyaha iyo telefishinka labada malalui Islaamka soo jiitay daawadayaasha badan.
Anigu waxaan tagay magaalada ka mid ah Muara Teweh, Kabubapen North Barito, Central Kalimantan suuqa baayacmushtariga badan oo dhaqameed halka aan dadaal ku wada iibiso dhawro television warbaahinta Rodja (dacaayad gaar ah telefishanka iyo murti Quraanka), ama dadkii dhegeystayaasha Radio Rodja la gaaray geeska of Sumatra in Borneo, sida in Berau iyo qaybaha kale ee Indonesia.
Sidaas daraaddeed dadkii Islaamiga ah ee Indonesia, ka duwan Muslimiinta ee la soo dhaafay sababtoo ah hiddo (ID card / aqoonsiga aqoonsiga), ayaa hadda laga bilaabo si ay u fahmaan Islaamka iyada oo muxaadarooyin diinta labadaba Radio, Television cilmiyeysan hadlay Ustad (culimada) qalin S3 (No penghafal Quraanka / Sunnah) qalin ah jaamacadaha ugu fiican Madiina, Saudi Arabia, si ay u fahmaan Islaamka waafaqsan ee Quraanka iyo Sunnaha cilmi ahaan, waa mar dambe oo keliya taqlid la macalimiinta, si laga yaabo inay ka fogaaday ku dhaqanka diinta oo laga daayo amray Allah iyo Nabi Muxammed.
Noble loo xiro awrah
Islam, diin in ammaanaa waafaqsan nooca nin. Taranka ka muuqataa waxbarista oo dhan. Amarada la xiro xubnaha taranka, ka mid ah tusaale ahaan yar, in Alle sida falimihiisii qurxin is tilmaamay. Ilaahay wuxuu leeyahay,
Banii Aadamow, xirtaan aad isku sharrixi kasta oo dhibaatayn (u iili) masjidka! [Al-A'raf / 7: 31]
'Jewelry "aayaddan, waxay ka dhigan tahay dhar qarinaya xubnaha taranka, sida ku qoran by Ibn Abbaas anhu, rahimahullah Mujahid iyo kuwa kale. (Eeg Tafseer Tabari (12/391), Tafsir al-Baqawi (3/225), iyo Tafsir Ibn Kathir (3/405)
Waa trimmer ah dharka aadanaha. Waxa uu sidoo kale waa calaamada ah in horumarka ilbaxnimada ah, sarajooggiisuna wuxuu ammaanta iyo sidoo kale astaan u tahay Furuujtooda. Halkii 'layna qaawiyo' waa mid calaamad u dhaqan heer hoose ah, oo calaamad u ah dulli iyo sii daraysa ee sharafta aadanaha sida ku yar yahay sida xayawaanka ama ka badan caayaya.
Sidaa darteed, jinnigii ayaa had iyo jeer iyagoo jirrabaya nin dharka, iyada ku qariyaan cawradooda, sida Alle ka digay in aadanuhu ma dagin jirrabaadda Shayddaanka. Fikiraa Kalimooyinka:
Banii Aadamow! Waa in aan laydin khiyaanayn Ibliisku! sida uu soo saaray hooyaday aabbahaa samada ka, dharka labadaba si ay u muujiyaan taranka labada. [Al-A'raf / 7: 27]
Si kastaba ha ahaatee, cadowga dhimanaya Ibliiska aadanaha ma joojin doono kaftan si walba. Haweenka, mid u dhexeeya sed iyo dabin jinniyo awood u burburinaya moral iyo aadanaha ilbaxnimada. Faa'iidada iyo faa'iido darrada haweenka loo isticmaalo in lagu gaaro ujeedooyin ay xun. Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ina xusuusinaysaa:
Haweeney waa cawradii, markii uu ka yimid, Ibliisku wuxuu tegi doonaa waxa la. [HR. At-Tirmidi (no. 1173) iyo kuwo kale. Magaacabay Abduh by Sheikh al-Albaaniya]
Haweenka, marka guriga ka baxay, ka dibna waxa ay soo jiidatay indhaha, si kastaba ha ahaatee xaaladda ay ku sugan. Sidaas waxa haddii ay si qalad ah u soo baxaan inay barbaro dareenka jinsiga ka soo horjeeda la urkooda ayuu sidoo kale muujisay isaga taranka ahayd gashan jirin in la xidho? Burburka ay noqon doonto ka sii daran. Waa arrin aad u murugo marka aan maqlo ama akhri warbaahinta, warka xadgudubka loo geysto dumarka wax walba waa oo ka dhacaya.
Sidaa darteed, waa in si deg deg ah u toobad keenaan in Alle ka hor soo socda dhimashada. Raggu waa indhaha ay! Hoos u habboon tahay in uu Laabeen eegin wax aan qiimihiisu uu arko. Ina keena aynu isku daynaa in xubnaha qoyskayagu dumar ah iyaga oo ka codsanaya in ay xirtaan dharka ah oo waafaqsan Shareecada Islaamka si iyaga u sharaf iyo sharaf iyo fogaado faraxumayn foolxun.
Shaykh al-Albaaniya yiri, "Allah Subhanahu wa imtithaal ayaa sharaxaad ka hadlo xijaab xigmad amray dheeraaday ee eraygiisii:
. ... Taasi waa si ay u fudud yihiin in la aqoonsado, si ay u wareersan ma aha "[Al-Ahzab / 33: 59]
Magac ahaan, haddii qof dumar ah oo daboolan xijaab by, waxaa la ogaan doonaa inuu haweenka oo iska ilaaliyaan wax kasta oo la quudhsaday iyo intii uu shaki ku jiro, ilaalin sharaf, iyo qof dumar ah oo wanaagsan dhexdooda ahaa. Haddii ay sidaas tahay xaaladdooda, ma kuwa sharka iyaga dhibaato doonaa Leexin. "
Iyada oo faragelin ka dheeraw, xitaa noqon nolol farxad iyo sharaf ku sii jiri doona dhawrsan.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 09 / Year XVII / 1435H / 2014. Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL. Solo - Solo Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo 57 183 Tel. 0271-858197 Fax 0271-858196]